တပည့်တော်ပြုစုပျိုးထောင်နည်း! အမှန်တကယ်အလုပ်ဖြစ်သောအစီအစဉ်တစ်ခု!| How to Make Disciples! A Plan That Actually Works! | Real Conversion
HOW TO MAKE DISCIPLES!
A PLAN THAT ACTUALLY WORKS!
ဇူလိုင်လ ( ၅ ) ရက်နေ့ ညနေပိုင်းတွင် ဟောကြားသော
"သင်တို့သွား၍ လူမျိုးတကာတို့ကို ငါ့တပည့်ဖြစ်စေလျက်၊ ခမည်း တော်၊ သားတော်၊ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏နာမ၌ ဗတ္တိဇံကို ပေးကြလော့။ ငါသည် သင်တို့အားပေးသမျှသောပညတ်တော်တို့ ကို စောင့်ရှောက်စေခြင်းငှါ ဆုံးမသြဝါဒပေးကြလော့။ငါသည်လည်း ကပ်ကမ္ဘာကုန်သည်တိုင်အောင် သင်တို့နှင့်အတူ အစဉ်မပြတ်ရှိ သည်ဟု တပည့်တော်တို့အား မိန့်တော်မူ၏။" (မဿဲ ၂၈း ၁၉- ၂၀)
လွန်ခဲ့သောအချိန်က ဒေသန္ဒာရအသင်းတော်၏ဗဟိုကျခြင်းနှင့် အဓိကျမှုအကြောင်း ကို ကျွနု်ပ်သင်ကြားခဲ့ရသည်။ ထိုအကြောင်းနှင့်ပါတ်သက်ပြီး ကြားသိခဲ့သည့်အချိန်ကို တိတိ ကျကျ မမှတ်မိတော့ပေ။ သို့ရာတွင် ၄င်းသည် အရမ်းစောသည်လည်း ဖြစ်နိူင်ပါသည်။ ၄င်းနှင့် ပါတ်သက်ပြီး ကျွနု်ပ်မယုံကြည်ခဲ့သည့်အချိန်ကို မမှတ်မိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဓမ္မသစ်ကျမ်း တွင်တွေ့ရှိသမျှသောအရာတိုင်းသည် ဒေသန္တာရအသင်းတော်တွင် အုတ်မြစ်ချထားသည်။ Jim Gent က " 'အသင်းတော်' ဟူသောစကားလုံးကို ဓမ္မသစ်ကျမ်းတွင် အကြိမ်တစ်ရာ လောက်အသုံးပြုထားပါသည်။ အသင်းတော်ဟူသည်မှာ ဘုရားသခင်၏နောက်မှရသောအကြံ ဉာဏ်အချို့မဟုတ်ပါ။ ကနဦးအသင်းတော်များတွင် ဒေသန္တာရအသင်းတော်များကို ဘုရားက အလုပ်လုပ်ဆောင်ရန် ရွေးချယ်ထားသည်တိုင် ဘုရားသခင်ဘိသိတ်ပေးထားသည်။" (Jim Gent, ဒေသန္တာရအသင်းတော်၊ ကမ္ဘာဂြိုလ်အတွက် ဘုရားသခင်၏အကြံအစည်၊ Smyrna Publications, ၁၉၉၄၊ စာ- ၈၁၊ ၈၃၊ ၈၄ )
"အသင်းတော်" ဟုအနက်ဖွင့်ဆိုထားသည့် ဂရိစကားလုံးမှာ "အက်ဂလီဆီယား" ဖြစ် သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ခေါ်ထုတ်ခံရသောလူတို့၏အစုအဝေးဟုဆိုလိုသည်။ လောကမှဘုရား သခင်ခေါ်ထုတ်သောသိုးစုနှင့်ခရစ်တော်၌ ၀ိညာဉ်တော်အားဖြင့်ပူးပေါင်းသူများဟုပင်ဆိုလို သည်။ ကောင်းမွန်စွာပြောဆိုရလျှင် ကျွနု်ပ်တို့သည် "အသင်းတော်သို့မသွားကြ" ပါ။ ကယ်တင် ခြင်းရရှိသောကျွနု်ပ်တို့သည် အသင်းတော်ပင်ဖြစ်ကြသည်။ ခရစ်တော်က ကျွနု်ပ်တို့အား မဿဲ ၁၆း ၁၇-၁၈ တွင် အသင်းတော်တည်ထောင်ခြင်းအကြောင်းကို သွန်သင်ထားသည်။ ထို့အတူ မဿဲ ၁၈း ၁၅- ၂၀ တွင် အသင်းတော်၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းနှင့်အခွင့်အာဏာများအကြောင်း ကို သွန်သင်ထားသည်။ သို့သော် ခရစ်တော်က အသင်းတော်လုပ်ဆောင်ရမည့်အရာ၊ အသင်း တော်၏ရည်ရွယ်ချက်နှင့်သာသနာလုပ်ငန်းတို့အကြောင်းကို မဟာစေခိုင်းချက်တွင် ဖော်ပြခဲ့ပြီး ဖြစ်သည်။ မာကု ၁၆း ၁၅ တွင် ခရစ်တော်က ဤသို့ဆိုသည်။
"သင်တို့သည် လောကီနိူင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှသို့သွား၍၊ ဝေနေယျ တ္တဝါပေါင်းတို့အား ဧဝံဂေလိတရားကိုဟောကြလော။" (မာကု ၁၆း ၁၅ )
ကမ္ဘာမြေအဆုံးထိတိုင်သွားရန် မိန့်တော်မူသော အမိန့်တော်မှာ ကြိမ်ဖြန်များစွာ ဖော်ပြထားပါ သည်။ သို့သော် ထိုအရာမှာ မဿဲ ၂၈း ၁၉- ၂၀ တွင် တွေ့ရှိရသည် မဟာစေခိုင်းချက်၏ အဓိ ကသော့ချက်မဟုတ်ပါ။ ဒေါက်တာ W. A. Criswell က "ယေရှုခရစ်တော်၏မဟာစေခိုင်းချက် မှာ ခေတ်ကာလတိုင်းတွင်ရှိသော အသင်းတော်များသို့ဖြစ်သည်၊ မဟာစေခိုင်းချက်တွင် အရေး ပါသည့်စကားအနေဖြင့်ပြောဆိုထားသည့်စကားလုံးမှာ 'လူမျိုးတကာတို့အားသွန်သင်ရန်' နှင့် 'တပည့်တော်ဖြစ်စေရန်' ဖြစ်သည်။" (The Criswell Study Bible, Thomas Nelson Publishers, ၁၉၇၉၊ မဿဲ ၂၈း ၁၉-၂၀ မှတ်စု)
အချို့က ဤမဟာစေခိုင်းချက်သည် တမန်တော်များကိုသာပေးထားသောအရာဖြစ် သည် ဟုဆိုကြသည်။ ထိုအချက်မှာ မှားယွင်းသောရှုထောင့်ဖြစ်သည်။ ဓမ္မသစ်အသင်းတော် များက ၄င်းကို သူတို့နှင့်အသင်းတော်များအားလုံးကိုပေးထားသည့်စေခိုင်းချက်အဖြစ် ယုံကြည် ကြသည်ကို မြင်တွေ့နိူင်ရန် တမန်တော်ဝတ္ထုကို ကျွနု်ပ်တို့ဖတ်ရှုနိူင်သ်။ ထို့အတူ ဒေါက်တာ Criswell ကလည်း "လူမျိုးတကားတို့အားသွန်သင်ရန်" ဟူသည်မှာ အမိန့်ပေးထားသည့်သ ဘောသက်ရောက်ပြီး ရှိရင်းစွဲအဓိပ္ပါယ်မှာ "တပည့်တော်ဖြစ်စေရန်" ဟု၍ ညွှန်းဆိုထားပါသည်။ နှစ်ပေါင်းများစွာ ကျွနု်ပ်၏သင်းအုပ်ဆရာဖြစ်ခဲ့ဖူးသော ဒေါက်တာ တိမောသေလင်း သည် နယူးအမေရိကန်စတင်းတက်ကျမ်းစာကို ဘာသာပြန်ဆိုသူများထဲက တစ်ဦးအပါအဝင်ပင်ဖြစ် သည်။ သူသည် Talbot Theological Seminary တွင် သင်ကြားပေးပြီး China Evangelical Seminary ကျောင်းအုပ်ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ဒေါက်တာလင်းက မဿဲ ၂၈း ၁၉-၂၀ အကြောင်းကို ဤသို့ရှင်းပြခဲ့သည်။
"မဟာစေခိုင်းချက်တွင် ကြိယာလေးခုပါ၀င်သည်။ "သွားပါ"၊ "တပည့်တော်ဖြစ်စေပါ"၊ "နှစ်ခြင်းပေးပါ"၊ "သွန်သင်ပါ" တို့ဖြစ်ပါ သည်။ "တပည့်တော်ဖြစ်စေပါ" ဟူသောကြိယာသည်သာ စေခိုင်း ချက်သဘောတရားဖြစ်သည်။ အခြားကြိယာသုံးခုမှာ ပါတီစီပယ် သို့မဟုတ် ကြိယာဆိုင်ရာနာမဝိသေသနများဖြစ်ကြသည်ဟု ဆို သည်။ ထို့ကြောင့် တိကျမှန်ကန်သောဘာသာပြန်ဆိုချက်မှာ ဤသို့ဖြစ်သင့်သည်။
ထို့ကြောင့် သွား၍ လူမျိုးတကာတို့အား တပည့်တော် ဖြစ်စေလော့။ ခမည်းတော်၊ သားတော်၊ နှင့် သန့်ရှင်း သောဝိညာဉ်တော်၏နာမ၌ ဗတ္တိဇံကိုပေးလျကက် သင်တို့အားငါပေးသမျှသောအရာကို ကျင့်စောင့်မည် အကြောင်း သွန်သင်လော့။ ငါသည်လည်း ကပ်ကမ္ဘာ ကုန်သည်တိုင်အောင် သင်တို့နှင့်အတူရှိနေမည်။"
တနည်းအားဖြင့် :သွားပါ" ဟူသည်မှာ အမိန့်တော်မဟုတ်ပါ။ သို့သော် "တပည့်ဖြစ်စေပါ" ဟူသည်မှာ အမိန့်ဖြစ်သည်။ မဟာ စေခိုင်းချက်၏အနှစ်ချုပ်လည်းဖြစ်ပါသည်။ ( တိမောသေလင်း၊ S.T.M., Ph.D., အသင်းတော်ကြီးထွားခြင်း၏လှို့ဝှက်ချက်၊ FCBC ၊ ၁၉၉၂၊ စာ- ၅၉ )
Albert Barnes ကလည်း ထိုနည်းအတိုင်းပင် "[သွန်သင်ပါ] ဟူသောစကားလုံးသည် "တပည့်တော်" သို့မဟုတ် "တပည့်တော်ဖြစ်စေပါ" ဟအဓိပ္ပါယ်ရှိသည် ဟုဆိုသည်။ (ဓမ္မသစ် ကျမ်းနှင့်ပါတ်သက်ပြီးဘာနခ်စ် မှတ်စု၊ Baker Book House, ၁၉၈၃၊ မဿဲ ၂၈း ၁၉ မှတ်စု)နယူးအင်တာနေရှင်နယ်ဗာရှင်းက ၄င်းကို "တပည့်တော်ဖြစ်စေပါ" ဟူ၍ ပြန်ဆိုထားပါ သည်။ (NIV, မဿဲ ၂၈း ၁၉ ) လူသရင်ကျမ်းစာအနက်ဖွင့်သူ Dr. R. C. H. Lenski ကလည်း ၄င်းကို ဤနည်းအတိုင်း ဘာသာပြန်ဆိုထားပါသည်။ "သွား၍၊ လူမျိုးတကာတို့ကို တပည့် တော်ဖြစ်စေပါ" ဟူ၍ဖြစ်သည်။ (The Interpretation of St. Matthew's Gospel, Augsburg Publishing House, ၁၉၆၁၊ စာ- ၁၁၇၀ ) "တပည့်တော်ဖြစ်စေပါ" ဟူသည်မှာ ချားလ်ဂျွန်အဲလီဂွတ်နှင့်ဂျွန်ပီတာလန်း တို့က ၄င်းတို့၏အနက်ဖွင့်ကျမ်းများတွင်ပေးထားသည့် ဘာသာပြန်ဆိုချက်ပင်ဖြစ်သည်။ ၀ီလီယမ်လင်ဒရီဆင်က "သွား၍၊ တပည့်တော်ဖြစ်စေပါ" မှာ ၄င်းကိုယ်တိုင်၌ပင် အမိန့်ဖြစ်သည်။ ဤသည်မှာ သွက်လက်ဖြတ်လတ်သောအမိန့်၊ တိုက်တွန်း ချက်ပင်ဖြစ်သည်။ ( မဿဲခရစ်ဝင်ကျမ်း၊ Baker Book House, ၁၉၈၁၊ စာ-၉၉၉ ) ထို့ကြောင့် မဟာစေခိုင်းချက်၏အကြောင်းအရာမှာ ဒေသန္တာရအသင်းတော်၏သာသနာလုပ်ငန်းနှင့်ရည် ရွယ်ချက်ပင်ဖြစ်သည်။ ဒေသန္တာရအသင်းတော်တွင်လုပ်ဆောင်သမျှသည် သွား၍တပည့်တော် ဖြစ်စေခြင်နှင့်တစ်လုံးတဝတည်းဖြစ်စေသည်။ ထိုအတူ သူတို့ကို နှစ်ခြင်းပေးပြီး ခရစ်တော်ပေး သမျှသောတရားကိုသွန်သင်ရန်ဖြစ်သည်။ ဒေသန္တာရအသင်းတော်ဟူသည်မှာ "လူမျိုးတကာ တို့အား သူ၏တပည့်တော်ဖြစ်စေရန် သင်တန်းကျောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွနု်ပ်၏တရားဒေသ နာကို ဂရုတစိုက်နားထောင်သောသူက ကျွနု်ပ်သည် Dr. John R. Rice ၏စကားကို ၀န်ခံ ထားကျောင်းသိကြလိမ်
အချက်တိုင်းတွင် သဘောတူလက်ခံသည်ဟုတော့ မဆိုလိုပါ။ သို့သော် ပျော်ဆုံး ၀ိညာဉ်ဖမ်းခြင်းနှင့်ပါတ်သက်ပြီး ၄င်း၏ခံယူချက်ကိုမူ အခိုင်အမာယုံကြည်သဘောတူထားပါ သည်။ မဿဲ ၂၆း ၁၉-၂၀ ခရစ်တော်၏မဟာစေခိုင်းချက်ကို ပြန်လည်အလေးအနက်ထားပြီး ဖော်ပြထားသည့် Dr. Rice က ဤသို့ဆိုသည်။
လူတိုင်းလူတိုင်းက ကယ်တင်ရှင်စီမံထားသည့် မဟာစေခိုင်းချက် သည် ၀ိညာဉ်ရိမ်သိမ်းခြင်းတွင် ဦးစားပေးရမည်အကြောင်း၊ ၀ိညာဉ်ရိပ်သိမ်းခြင်းသည် ခရစ်ယာန်များ၊ သင်းအုပ်များ၊ အသင်း တော်များတို့၏အဓိကလုပ်ငန်းဖြစ်ကြောင်းဆောင်းဆိုထားသည်ကို ယုံကြည်ကြပေလိမ့်မည်။..[သွား၍ လူမျိုးတကာတို့အားသွန် သင်ရန်] ဤနေရာတွင် "သွန်သင်ပါ" ဟူသောစကားလုံးသည် သမ္မာကျမ်းစာကို ခရစ်ယာန်များအား အသေးစိတ်ရှင်းပြရန်ဟု မဆိုလိုပါ။ "တပည့်တော်ဖြစ်စေရန်" ဟုသာ ဆိုလိုပါသည်။ ဂရိစ ကားလုံး "မက်ထေသီအို" ဟူသည်မှာ "တပည့်တော်ဖြစ်စေရန်" ဟုအဓိပ္ပါယ်ရသည်။ .. ထို့ကြောင့် မဟာစေခိုင်းချက်တွင် စေခိုင်း ခဲ့သောပထမဆုံးမဟာစေခိုင်းချက်မှာ တပည့်တော်ဖြစ်စေရန်ဖြစ် သည်။ (John R. Rice, D.D., Litt.D., ကျွနု်ပ်တို့၏အသင်းတော် များက ပျောက်ဆုံးဝိညာဉ်မရိပ်သိမ်းနိူင်သည့်အကြောင်းတရား၊ Sword of the Lord Publishers, ၁၉၆၆၊ စာ- ၂၂ )
"တပည့်တော်" ဟုအနက်ဖွင့်ဆိုထားသည့်ဂရိစကားလုံးကို W. E. Vine က စုံစုံလင်လင်ဖော်ပြ ထားပါသည်။ "တပည့်တော်တစ်ယောက်ဟူသည်မှာ တပည့်(ကျောင်းသား) တစ်ယောက် သက်သက်မဟုတ်၊ "နောက်လိုက်သူ" လည်းဖြစ်ပါသည်။ ထို့အတူ သူတို့အကြောင်းနှင့်စပ် လျဉ်း၍ ၄င်းတို့၏ဆရာများကိုအတုခိုးသူများဟုလည်းဆိုပါသည်။" (W. E. Vine, ဓမ္မသစ်စ ကားလုံးများရှင်းပြအဘိဓါန်၊ Fleming H. Revell Publishers, ၁၉၆၆၊ စာ-၃၁၆ )
သို့ရာတွင် ကျွနု်ပ်တို့သည်တပည့်တော်အသစ်များကို မည်သို့စုဆောင်းနိူင်မည်နည်း ဟူသောမေးခွန်းထွက်ပေါ်လာသည်။ ထိုအရာမှာ ကျွနု်ပ်တို့၏အချိန်ကာလတွင် ထွက်ပေါ်လာ သောဝေဖန်သည့်မေးခွန်းတစ်ခုဖြစ်မည်ဟု ထင်မိသည်။ ကျွနု်ပ်တို့က အတိတ်ကအလုပ်ဖြစ်ခဲ့ သည် နည်းဗျူဟာဟောင်းများသည် ယနေ့ဒေသန္တာရအသင်းတော်တွင် လူသစ်များရရှိနိူင်ရန် အလုပ်မဖြစ်နိူင်သည်ကို တွေ့ရှိရသည်။ ထိုအရာများသည် အလုပ်မဖြစ်နိူင်တော့ပါ။ ဝေစာများ ကိုပေးကမ်းခြင်းသည်အသင်းတော်တစ်ခုတွင် တပည့်တော်သစ်များကိုရရှိနိူင်မည်မဟုတ်။ တံ ခါးရှေ့တွင်ဖိတ်ခေါ်ထားချက်များကိုဆွဲချိတ်ထားသော်လည်း အကျိူးမရှိ။ တစ်အိမ်ပြီးတစ်အိမ် သွားပြီး "အပြစ်သားတို့၏ဆုတောင်းချက်" တည်းဟူသောဆုတောင်းချက်ကို ဆုတောင်းထား သော်လည်း အကျိုးမရှိ။ ဤနည်းဗျူးဟာဟောင်းများကိုအလေးထားကြိုးစားလုပ်ဆောင်သော သူများက အသင်းတော်တွင် တပည့်တော်သစ်များမရရှိနိူင်တော့သည်ကို သိရှိကြပေမည်။
ကျွနု်ပ်သည် ပထမဆုံးပြောင်းလဲလာသည့်အချိန်တွင် ဂျွန်ဝယ်စလီ၏ခရီးသွားမှတ်တမ် ကိုဖတ်ရှုခဲ့သည်။ အပြင်သွားခရီးထွက်ပြီးလယ်ကွင်းပြင်များတွင် တရားဟောရန်မှာ ဂျွန်ဝယ်စ လီ၏နည်းဗျူးဟာပြင်ဖြစ်ခဲ့သည်။ လူတို့သည်ရောက်လာကြသဖြင့် သူက အဖွဲ့ငယ်လေးများ ကို ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။ ထိုနည်းလမ်းမှာ ဧဝံဂေလိလုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်ရမည်နည်းလမ်းဟု ကျွနု်ပ် ထင်မြင်မိသည်။ ထို့ကြောင့် ကျွနု်ပ်သည် အလုပ်လုပ်ပြီးနောက်လောဒ့်အိမ်ဂျယ်မြို့ထဲတွင် သွားပြီး လမ်းပေါ်တွင် နေ့တိုင်းတရားဟောခဲ့ပါသည်။ ရလဒ်က မရှိသလောက်ပါဘဲ။ ခင်ပွန်း သည်က လမ်းပေါ်ကျွနု်ပ်၏တရားဟောချက်ကိုကြားနာပြီးနောက် အသက်ကြီးသောလင်မယား နှစ်ဦးကို ၄င်းတို့အိမ်၌ ခရစ်တော်ထံပါးသို့ မျှော်လင့်ချက်ကြီးစွာဖြင့် ဦးဆောင်ခဲ့သည်။ သို့သော် ထိုနှစ်ဦးမှာ လမ်းပေါ်တွင် နှစ်နှစ်တရားဟောပြီးနောက် ရရှိလာသည့် အသီးများသာဖြစ်သည်။
နောက်တခါ ဝေစာဝေခြင်းကို ကြိုးစားအားထုတ်ပြန်သည်။ ဤအသင်းတော်ကိုအစပြု သည့်အချိန်တွင် ဝေစာများကို အချိန်တိုင်းဝေငှခဲ့သည်။ ဖျမ်းမျှအားဖြင့် ကယ်တင်ခြင်းဝေစာ ငါးသောင်းနီးပါးဝေမယ်လို့မျှော်လင့်ပါသည်။ ထိုအရာမှာ အသင်းတော်နာမည်၊ ဖုန်းနံပါတ်ဖြင့် ကျွနု်ပ်တို့၏ဝေစာများသာဖြစ်သည်။ သို့ရာတွင် နှစ်ပေါင်းများစွာကြာ ဝေစာပေါင်းထောင်ပေါင်း များစွာဝေလာသည်နောက် ကျွနု်ပ်တို့အသင်းတော်သည် လူတစ်ဦးကိုမျှ ဆွဲမခေါ်နိုင်ခဲ့ကြပါ။ တစ်ယောက်မျှမခေါ်နိူင်ပါ။
ထို့အတူ တစ်အိမ်ပြီးတစ်အိမ်သွား၍ ကယ်တင်ခြင်းအစီအစဉ်ကိုသင်ကြားပေးရန် ကြိုး စားပြန်သည်။ နောက်ဆုံးတွင် မည်ကဲ့သို့ကယ်တင်တော်မူခြင်းသို့ရောက်နိူင်သည်ဟူသောရှင်း လင်းချက်ဖြင့် တိတ်ခွေကိုအသံသွင်းထားနိူင်သည်။ ကျွနု်ပ်၏တို့လူများက ထိုအသံသွင်းထား သည့်တိတ်ကို ရာပေါင်းများစွာသောပျောက်ဆုံးလူများထံ ဖွင့်ပြနိူင်ခဲ့သည်။ သို့သော် အနည်း ငယ်မျှ၊ မရှိသလောက်သာ ဘုရားကျောင်းသို့လာကြသည်။ လာသောသူအနည်းစုထဲမှလည်း လူငယ်လုံးဝပါမလာပါ။ ကျွနု်ပ်တို့နှင့်အတူရှိနေမည့်သူအဖြစ် အဘယ်သူကိုမျှ မစဉ်းစားနိူင်ခဲ့ပါ။
နောက်ဆုံးတွင် ကျွနု်ပ်တို့သည် ရိုးစင်းသောခေါ်ဖိတ်မှုကိုလုပ်ဆောင်ကြသည်။ ကျမ်း စာ သို့မဟုတ် ဝေစာများ သို့မဟုတ် အခြားမည်သည့်စာအုပ်စာပေမျှယူမသွားကြပါ။ စျေးတန်း များ၊ ကောလိပ်များ၊ အချို့ရွေးချယ်ထားသည့်လမ်းထောင့်များသို့ ကျွနု်ပ်တို့၏လူများကို စတင် စေလွှတ်ခဲ့ကြသည်။ သူတို့သည်လူတွေကိုချဉ်းကပ်ပြီး သူတို့နှင့်စတင်စကားပြောကြသည်။ သူတို့က ကျွနု်ပ်တို့နှစ်ခြင်းအသင်းတော်၏ပါတီပွဲသို့လာရောက်ကြရန် ခေါ်ဖိတ်ကြသည်။ သူတို့ က ထိုသူ၏နာမည်နှင့်ဖုန်းနံပါတ်ကို စတင်မေးလာကြလိမ့်မည်။ ကျွနု်ပ်တို့က လူငယ်တွေ့ကို အဓိကထားကြသည်။ Dr. Timothy Lin က "နည်းဗျူဟာများအရ၊ တရုတ်လူမျိုးများကြားတွင် ခရစ်တော်ကိုလက်ခံသောသူများကို ရာခိုင်နှုန်းအားဖြင့်ကြည့်လျှင် အသက် ၄၀ အထက်သည် အလွန်ပင်နည်းပါးလှသည်" ဟုဆိုသည်။ (ထပ်၍၊ စာ- ရ၃) သို့ရာတွင် တရုတ်မဟုတ်သော သူများကြားတွင် ထိုထက်ပင်နည်းပါးလှသည်။ အခြားသောနည်းဗျူဟာများက ပြောင်းလဲခြင်း အားလုံးနီးပါး (၉၀% သို့မဟုတ် အထက်) သည် အသက် ၃၀ မတိုင်မှီကဖြစ်ပျက်သည်ကို ပြသထားပါသည်။ လေ့လာမှုအားလုံးက အသက်ကြီးသူများသည် ပြန်လည်အတွန်းလှန်နိူင်ဆုံး လူများဟုဖော်ပြထားသည့်တိုင် နောက်ဆုံးသောကာလရှိတရားဟောဆရာများစွာတို့သည် ၄င်း တို့၏ပျောက်ဆုံးဝိညာဉ်ဖမ်းဆီးခြင်းတွင် အသက်ကြီးသူများကို မဏ္ဍိုင်ထားကြသည်က ကျွနု်ပ် ကိုအံ့သြမင်သက်စေပါသည်။ ဒေါက်တာ လင်းက ကျွနု်ပ်တို့သည် လူငယ်များအားတပည့်တော် ဖြစ်စေခြင်းကို အနိူင်အထက်လုပ်ဆောင်ရန်လိုကြောင်းကိုပြောဆိုခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် ကျွနု်ပ် တို့သည် အသက် ၁၆ နှင့် ၂၅ ကြားကို အဓိကထား လုပ်ဆောင်ထားသင့်ပါသည်။ နောက်ဆုံး သောကာလရှိတရားဟောဆရာများသည် ချက်ချင်းရရှိသောအကျိူးရလဒ်ကိုလိုလားကြသည်။ ထို့ကြောင့် သူတို့က နည်းလမ်းအမျိုးမျိုးဖြင့် အခြားအသင်းတော်များက "အသင့်ဖြစ်ပြီးသော" ခရစ်ယာန်များကို ရရန် ကြိုးစားအားထုတ်ကြသည်။ သူတို့က ၄င်းတို့၏အသင်းတော်ဟောင်း ကိုစွန့်ပစ်ပြီး သူတို့နှင့်အတူ လာရောက်ပူးပေါင်းရန် လုပ်ဆောင်တတ်ကြသည်။ ဒေါက်တာ James Dobson က ကျွန်ုပ်တို့အသင်းတော်များတွင်ရှိသည့်ကြီးထွားမှုအားလုံးနီးပါသည် အ ပြောင်းအရွေ့အားဖြင့်ဖြစ်သည်ဟု ဆိုခဲ့သည်။ ဤသည်မှာ ၀မ်းနည်းစရာအခြေအနေပင်ဖြစ် သည်။ တရားဟောဆရာများသည် ထိုအရာကိုလုပ်ဆောင်ရန် တွန်းအားပေးကြသည်။ အ ကြောင်းမှာ သူတို့က ပျောက်ဆုံးသောလောကကြီးထဲတွင် တပည့်တော်သစ်များကိုမည်သို့ရှာ ဖွေရရှိမည်ကို မသိရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ တရားဟောဆရာများစွာက ပျောက်ဆုံးသောလူ များကိုမည်သို့ဆွဲဆောင်ပြီး ပြောင်းလဲစေလျက် တပည့်တော်ဖြစ်စေရမည်ကို နားမလည်ကြ ပေ။ အဘယ်အရာကို လုပ်ဆောင်ရမည်လည်း မသိရှိကြပေ။ သူတို့သည် အခြားအသင်းတော် ထံက "သိုးသူခိုး" သာလုပ်ဆောင်တတ်ကြပါသည်။ နိူးထမှုမရှိသည်လည်း အံ့သြစရာမရှိပေ။
ကျွနု်ပ်တို့၏လူများသည် "ဧဝံဂေလိလုပ်ငန်း" မှပြန်လာကြသည့်အချိန်တွင် သူတို့ သည် ဖုန်းရှင်များထံမှရရှိလာသောနာမည်များနှင့်ဖုန်းနံပါတ်များကို ဟိုလှန်သည်လှန် လှန်ဖြစ် ကြသည်။ ဖုန်းပိုင်ရှင်များက ကျွနု်ပ်တို့နှင့်အတူရှိနေကြရန် မည်သို့ဆက်သွယ်ခေါ်ဖိတ်ရမည် ကို သင်ယူခဲ့ကြသည်။ ကျွနု်ပ်တို့က သူတို့လာရမည့်အကြောင်းကို အသေးစိတ်ပြောခဲ့ကြ သည်။ ကျွနု်ပ်ပြောပြမည်။ ထို့နောက် ကျွနု်ပ်တို့တွင် မွေးနေ့ပွဲရှိသည်။ အတူတကွစားသောက် ကြမည်ဟု ပြောဆိုမည်။ ရက်အနည်းငယ်အတွင်းတွင် မွေးနေ့ပွဲကျင်းပမည့်သူ အမြဲတမ်းရှိ သည်။ ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်တွင် လူသစ်များလာပြီးနောက် သူတို့ထံသို့ဧဝံဂေလိသွားရန် ခေါ်ဖိတ်သည်။ ကျွနု်ပ်တို့က သူတို့ပြောင်းလဲလာရန် စောင့်မေနကြပါ။ ကျွနု်ပ်တို့က ယေရှု၏ စံနမူနာကိုသာလိုက်လျှှောက်ကြသည်။ သူသည် ရှိမုန်ပေတရု၊ သံသယရှိသူသောမ၊ နှင့်အခြား သူတို့အား ဧဝံဂေလိတရားနားလည်ပြီးပြောင်းလဲခြင်းမရှိမှီ တပည့်တော်များအဖြစ် သူ့နောက် သို့လိုက်ရန် ခေါ်ခဲ့သည်။ ယုဒသည် မပြောင်းလဲဘဲ တပည့်တော်တစ်ယောက်အနေဖြင့် သုံး နှစ်တိုင်အောင်နောက်တော်သို့လိုက်ကြသည်။ ထို့ကြောင့် သူတို့သည် မပြောင်းလဲခင်ကတည်း က တပည့်တော်များဖြစ်လာကြသည်။ ထိုအရာမှာ ယေရှုအသုံးပြုသည့် နည်းစနစ်ပင်ဖြစ်သည်၊ ထို့အတူ ကျွနု်ပ်လည်းလုပ်ဆောင်ရန်ကြိုးစားနေသည့် တစ်ခုတည်းသောနည်းဗျူဟာလည်းဖြစ် ပါသည်။
ဆက်လက်၍၊ ယေရှုသည် သူတို့အား တပည့်တော်ဖြစ်စေခြင်းကို "လျော့လာသည်" မရှိပါ။ အမှန်တကယ် မလျောချပါ။ သူသည် ၄င်းတို့အား ထိုအထဲသို့ ထိုးသွင်းလိုက်သည်။ ယေရှုက ပထမတပည့်တော်များကိုမည်သို့ခေါ်သည်အကြောင်း မှတ်သားထားပါ။ ယေရှုက ရှိမုန်ပေတရုနှင့်အန္ဒြေ တို့ ငါးဖမ်းနေသည်ကိုတွေ့ခဲ့ကြောင်း ကျွနု်ပ်တို့သိကြသည်။ ယေရှုက သူတို့အား "ငါ့နောက်သို့လိုက်ကြလော့" ဟုသောအခါ သူတို့သည် ၄င်းတို့၏ပိုက်ကွန်ကိုစွန့်၍ သူ့နောက်သို့လိုက်ကြသည်။ (မဿဲ ၄း ၁၉- ၂၀ ) ထို့အတူ ယေရှုသည် ယာကုပ်နှင့် ယောဟန်တို့ကိုလည်း လှေငယ်လေးတစ်ခုထဲတွင် တွေ့ခဲ့သည်။ သူတို့ကို ခေါ်ခဲ့သည်။ "သူတို့ သည် လှေကိုချက်ချင်းပင်စွန့်ပစ်၍….သူ့နောက်သို့လိုက်ခဲ့ကြသည်။"(မဿဲ ၄း ၂၁၊ ၂၂ ) သူတို့က ယေရှုသည် အဘယ်သူဖြစ်သည်ကို မသိခဲ့ကြပါ။ သူတို့က "ဤသူကား အဘယ်သို့ သောသူနည်း" ဟုမေးကြသည်။ ( မဿဲ ၈း ၂၇ ) ထိုအချိန်တွင် ယေရှုတွင် တပည့်တော် ဆယ့်နှစ်ပါးရှိခဲ့သည်။ သူတို့က ယေရှုသည် အဘယ်သူဖြစ်သည်ကိုတောင် သိထားခြင်းမရှိကြ သေးပေ။ ယေရှုသည် အဘယ်အရာကိုလုပ်ဆောင်ခဲ့သနည်း။ သူက ၄င်းတို့အား ဧဝံဂေလိလုပ် ရန် နှစ်ယောက်စီစေလွှတ်ခဲ့သည်။ ထို့နောက် အခြားတစ်ဘက်တွင် ဖာရိရှဲများနှင့်အငြင်းပွားမှု တစ်ခုထဲသို့လည်း ဦးဆောင်ခဲ့သည်။ သူတို့က ငွေရတတ်သည့်အရာရှိငယ်တစ်ဦးကိုတွေ့ခဲ့ကြ သည်။ သူက ထာဝရအသက်ကိုရရှိရန် အဘယ်အရာကိုလုပ်ဆောင်ရမည်အကြောင်း ယေရှု အား မေးမြန်းခဲ့သည်။ ယေရှုက "သင်၌ရှိသမျှကိုရောက်ပြီး ဆင်းရဲသားတို့အားပေးလော။ ထို့ နောက် ငါ့နောက်သို့လိုက်လော့" ဟု မိန့်တော်မူခဲ့သည်။ (မဿဲ ၁၉း ၂၁ ) ငွေရတတ်သောလူ ငယ်သည်လည်း ၀မ်းနည်းလျက် ထွက်သွားတော်မူခဲ့သည်။ သူသည် တပည့်တော်တစ် ယောက်ဖြစ်မလာခဲ့ပါ။
ထို့နောက် ယေရှုသည် တပည့်တော်များအား အသေခံရန် ယေရုရှလင်မြို့သို့သွားရ မည်အကြောင်း မိန့်တော်မူခဲ့သည်။ သူသည် အဘယ်အရာကိုဆိုလိုသည်ကို တပည့်တော်များ နားမလည်နိူင်ကြ။ သုံးနှစ်လောက်ကျော်လွန်ပြီးနောက်တွင်လည်း သူတို့သည် ဧဝံဂေလိတရား ကို နားမလည်ကြသေး။ သူတို့သည် ပြောင်းလဲခြင်းမတိုင်မှီကတည်းက တပည့်တော်ဖြစ်ရန် သင်ယူခဲ့ကြသည်။ ယေရှုသည် ဖမ်းဆီးခြင်းကိုခံတော်မူပြီး လက်ဝါးကပ်တိုင်တွင်အသေခံရန် ဆောင်ယူခြင်းကိုခံသည့်အချိန်တွင် သူတို့အားလုံးသည်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ခဲ့ကြပြီး နောက် ဆုံးတွင် အထက်ခန်း၌ပုန်းရှောင်ခဲ့ကြသည်။ ရှင်ပြန်ထမြောက်ရာနေ့တနင်္ဂနွေနေ့ညနေတွင် ရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့လေသောယေရှုသည် တပည့်တော်များထံသို့ ထင်ရှားလာခဲ့သည်။ သူတို့က ယေရှုအသက်ရှင်တော်မူသည်ကို မြင်ကြသောအခါ အတိုင်းထက်အလွန် မြူးထူးပျော်ပါးခဲ့ကြ သည်။ ထို့နောက်တွင် သူက "သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုလက်ခံကြလော့" ဟု မိန့်တော်မူခဲ့ သည်။ ( ယောဟန် ၂၀း ၂၂ ) ဒေါက်တာ J. Vernon McGee က ကျွနု်ပ်တို့၏သခင်ဘုရား သည် သူတို့အပေါ်မှုတ်သွင်းတော်မူပြီး သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုလက်ခံရလော့ဟု ဆိုသည့်ခဏတွင် ဤသူတို့သည် အသစ်ပြုပြင်ခြင်း (ဒုတိယမွေးခြင်း) ခံရသည်ဟု ကျွနု်ပ်ယုံ ကြည်မိပါသည်၊ ထိုအကြောင်းအရာမတိုင်မှီ သူတို့သည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်ကျိန်းဝပ်ခြင်းမခံ ကြရပေ" ဟုဆိုထားပါသည်။ (J. Vernon McGee, Th.D., Thru the Bible, အတွဲ ၄၊ စာ- ၄၉၈၊ ယောဟန် ၂၀း ၂၂ မှတ်စု )
ဒေါက်တာ McGee သည် မှန်ကန်သည်ဟု ကျွနု်ပ်ထင်မိသည်။ သို့သော် ပြီးခဲ့သည့် အချက်ပေါ်တွင် သင်က အပြည့်အဝသဘောမတူသော်လည်း ခရစ်တော်က တမန်တော်များ ကိုတပည့်တော်ဖြစ်စေခြင်းသည် ယနေ့ကျွနု်ပ်တို့က အသင်းတော်များတွင်လုပ်ဆောင်နေခြင်း နည်းလမ်းများအလွန်ပင် အာစုံစိုက်နည်းလှသည်မှာ ရှင်းနေပါသည်။ သူသည် အခြားအရာများ မတိုင်းမှီ သူတို့အား တပည့်တော်ဖြစ်စေပါသည။်
လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းတစ်ရာတွင် ကျွနု်ပ်တို့သည် လူများကို ခရစ်တော်ထံသို့ ဦးစွာ "ဦးဆောင်" ရန် ကြိုးစားခဲ့ကြသည်။ ထို့နောက်မှသာ သူတို့ကို "ထောက်မ"ပေးသည်။ ခရစ် တော်က ထိုအရာနှင့်ဆန့်ကျင်ဘက်သဘောကိုလုပ်ဆောင်ပါသည်။ ကျွနု်ပ်က အချို့တို့သည် ကျဆုံးသောနည်းလမ်းထဲမှထွက်ပြေးလွတ်မြောက်ပြီး ယေရှုကတပည့်တော်လုပ်ဆောင်သည့် နည်းလမ်းအတိုင်းသွားကြမည်ဟုမျှော်လင့်သည်။ ထို့အတူ သင်သည် ကျွနု်ပ်တို့နှင့်အတူရှိနေ ခဲ့လျှင် ယေရှုခရစ်တော်၏တပည့်ဖြစ်လာရန် သင့်အားတောင်းလျှောက်ပါ၏။ ကျွနု်ပ်တို့၏အ သင်းတော်လမ်းထဲသို့ ၀င်လာခဲ့ပါ။ လက်ဝါးကပ်တိုင်ကိုထားလျက် ခရစ်တော်၏နောက်တော် သို့လိုက်ပါ။ တနင်္ဂနွေနံနက်နှင့်ညနေလည်းလာပါ။ စနေနေ့ဆုတောင်းအစီအစဉ်သို့လည်း လာ ရောက်ပါ၀င်နိူင်ပါသည်။ လေးနက်သည့် ခရစ်ယာန်အသက်တာဖြင့်အသက်ရှင်ဖို့ သင်ယူလေ့ လာပါ။ ထို့နောက် ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ကိုးစားလျက် အသစ်တဖန်မွေးဖွါးခြင်းခံပါ။ အသွေး တော်အားဖြင့် အပြစ်အလုံးစုံတို့ကို စင်ကြယ်စွာဆေးကြောပေးတော်မူမည်။
ကျွနု်ပ်တို့နှင့်အတူ လာရောက်ရန် သင့်အားခေါ်ဖိတ်ပါ၏။ သင့်အား ခရစ်တော်၏ အထံပါးတွင်သင်ယူလေ့လာပြီး နောက်တော်လိုက်သည့်တပည့်တော်ဖြစ်လာရန် ခေါ်ဖိတ်ပါ၏။ ကျွနု်ပ်တို့၏ဘုရားကျောင်းသို့ တနင်္ဂနွေနေ့၊ တနင်္ဂနွေညများတွင် လာရောက်ရန်လည်း ဖိတ် ကြားအပ်ပါသည်။ ဆုတောင်းခြင်းနှင့်ဧဝံဂေလိလုပ်ငန်းအတွက် စနေနေ့ညတွင်လည်း လာ ရောက်နိူင်ပါသည်။ သင်သည် ငါ့တို့နှင့်အတူရှိနေလျှင် ခရစ်တော်သည် သင့်အား "လူကိုမျှား သောတံငါဖြစ်စေမည်။" သင့်အား ၀ိညာဉ်ရိပ်သိမ်းသူဖြစ်စေမည်။ လူကိုမျှားသောတံငါဖြစ်စေ မည်။ ယေရှုက "ငါ့နောက်သို့လိုက်လော့။ လူကိုမျှားသောတံငါဖြစ်စေမည်" ဟု မိန့်တော်မူ သည်။ ( မဿဲ ၄း ၁၉ ) အောက်ပါသံစုံကို ကျွနု်ပ်တို့နှင့်အတူသီဆိုကျူးဧပါ။
("သင့်အား လူကိုမျှားသောတံငါဖြစ်စေမည်"၊ Harry D. Clarke, ၁၈၈၈-၁၉၅၇)
("ဆောင်ယူပါ"၊ Alexcenah Thomas, ၁၉ ရာစု ရေးစပ်သည်။ )
ခရစ်တော်သည် သင်၏အပြစ်ကြွေးကိုပေးဆပ်ရန် လက်ဝါးကပ်တိုင်တွင် အသေခံ တော်မူခဲ့သည်။ သင်၏အပြစ်အလုံးစုံတို့ကိုဆေးကြောရန် မြတ်သွေးတော်ကိုသွန်းတော်မူခဲ့ သည်။ သင့်အား ထာဝရအသက်ကိုပေးရန် သေခြင်းမှပြန်လည် ထမြောက်တော်မူခဲ့သည်။ ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ကိုးစားပါ၊ ကယ်တင်တော်မူခြင်းသို့ရောက်လိမ့်မည်။ ပျောက်ဆုံးဝိညာဉ် များကိုသိမ်းဆည်းရန် ကျွနု်ပ်တို့နှင့်အတူလာပါ။ အာမင်..။
ဤတရားဒသေနာစာမူမြားကိုဤတရားဒေသနာစာမူများကို ကူးယူ၍မရပါ။ သင်သည် Dr. Hymers ၏ခွင့်ပြုချက်မလိုဘဲအသုံးပြုနိူင်သည်။ သို့သော်
တရားဒေသနာမတိုင်မှီ ကျမ်းစာဖတ်ကြားခြင်းကို မစ္စတာ Abel Prudhomme က ဆောင်ရွက်ပါသည်။ မဿဲ ၂၈း ၁၆- ၂၀။
တရားဒေသနာမတိုင်မှီ Mr. Benjamin Kincaid Griffith က ဂုဏ်တော်ချီးမွမ်းသည်။ "ဆောင်ယူပါ"၊
(Alexcenah Thomas, ၁၉ ရာစု ) ရေးစပ်သည်။)